Ampiasao ny orinasan-trosa sy ny orinasa efa zokinjokiny
Ampiasao ny orinasan-trosa miaraka amin'ny Programan'ny Tahirim-bola ho an'ny Tahirim-bola & Real Estate
Ireto misy ohatra tena marina momba ny fomba fiasan'ny Aged Corporation plus Corporate Credit Builder Program ary ny fomba nampiasan'ny mpanjifantsika roa ny orinasa vao nahazoana vola hividianana trano. Ho hitanao koa ny sarin'ny tetikasa misy eto ambany. (FANAMARIHANA: Fanampiana ara-bola be izany fa tsy karama kara-bola.)
Ataovy an-tsaina fa tsy ny hany fomba ahafahan'ny orinasan'ny orinasa ampiasaina. Ohatra iray amin'ny fomba maro azo atao izany. Tadidio ihany koa fa ny dingana arahina amin'ny fomba fitarihana sy ny famoahana ireo tolotra nosoratanao, ary ny antsipiriany dia voarakitra ao amin'ny taranjam-pampianarana izay ahitana ny orinasan-tserasera miaraka amin'ny fandaharanasa fanampiana ara-bola.
Fanamarihana: Mitandrema amin'ireo fikambanana amin'izao andro sy taona izao izay milaza fa afaka mahazo orinasa efa manana kara-bola mifandraika amin'izany. Raha te hividy orinasa efa antitra ianao dia omeo antso izahay. Rehefa azonao izany avy aminay dia afaka manampy anao hanamboatra vola izany.
FANAMARIHANA: Manana programa vaovao isika fa tsy ity iray ity izay ahafahantsika mamorona profil-bola momba ny orinasam-pandraharahana ary manampy anareo amin'ny fananganana orinasa fandraharahana mba ahafahanao manokatra tsinjara ho an'ny orinasa efa antitra. Niova ny tontolo iainana fanonerana ka tsy manolotra ny fandaharanasa araka izay voalaza eto. Ny fampahalalana etsy ambany dia fampifandraisana fahalalana sy fahalalana manokana avy amin'ireo mpandray anjara ao anatin'ilay tetikasa.
Ny roa tamin'ireo mpividy tao Tacoma, Washington, vady sy ny vadiny, Dwayne & Janet Anderson, dia naniry ny hividy ny tany, hanangana trano roa, ary hivarotra trano ho tombontsoany. Taorian'ny nahazoany orinasa iray avy aminay dia nanatrika ny fianarana fampiofanana azonay amin'ny fampiasana ny tsenam-bola momba ny orinasa.
Avy eo dia nanao tolotra roa izy ireo ho an'ny $ 125,000 sombin-taratasy iray izay nokaramain'ny orinasam-bola. Ny fampiofanana miaraka amin'ny orinasa miaraka amin'ny programa fanampiana trosa dia hampianatra anao ny fomba ahafahan'i Dwayne & Janet afaka nividy ny tany feno vola amin'ny programa momba ny orinasam-bola ho an'ny antsasaky ny paosy.
Sary tena marina momba ny fananganana lozan'ireo mpanjifanay, Dwayne & Janet, izay noraisin'izy ireo tamin'ny fampiasana ny orinasanay bola.
Ny trosa fanangonam-bola nanampiana an'i Dwayne & Janet hividy vola ao am-paosiny amin'ny fividianana ny tany. Noho izany, ny vola avy amin'ny vola azontsika hahazo azy dia navotsotra mba hividy ny tany ary betsaka kokoa ny entana rehefa mivoatra ny tetikasa.
Dwayne & Janet tsy voatery handoa vola mandra-pivarotana ny trano. Tsy voatery handoa zanabola amin'ny banky manontolo izy ireo. Tsy maintsy mandoa ny vola omen'ny mpampindram-bola izy ireo. Noho ny lazantsika, ny fitomboana ara-bola sy ny traikefa, dia misy rafitra mifandraika amin'ny mpampindram-bola, izay, fa tsy toy ny banky, dia hamatsy ny tetikasa manontolo miaraka amin'ny vola tsy misy pocket. (Mazava ho azy fa tsy manana fepetra tsy misy fepetra ny fikarakarana ny orinasa iray fa tsy maintsy hitady vola. Ny lanjan'ny fananana ara-bola sy ny fampiasana ara-bola ny tetikasa dia mitana andraikitra lehibe kokoa.)
Amin'ity tranga ity, amin'ny fividianana ilay tany, ny mpindram-bola dia ampy handoavana ny mpivarotra ny tany miaraka amin'ny vola fanampiny ho an'ny Dwayne & Janet's pockets. Hianatra ity teknika ity ianao amin'ny làlana fampiofanana, ny fomba hanoratana ny tolotra ary ny toerana ahitana ny fifanarahana. Indray, Dwayne & Janet dia tsy voatery handoa vola amin'ny antoka rehetra mandra-pivarotana ny trano.
Ny Corporate Credit Program sy ny rafitry ny tolotra dia afaka namatsy vola ampy mba hividianana ny tany miaraka amin'ny $ 25,000 isaky ny loka afaka niditra tao amin'ny paosin'i Dwayne & Janet. Satria nividy trano roa indray mandeha izy ireo, dia voalaza fa afaka nametaka ny $ 50,000 teo aloha. Ho fantatrao ny fomba nataon'izy ireo tamin'ity diany ity.
Vantany vao nahazo ny fahazoan-dàlana, izay ampianarinay ny fianaranay, dia hitanay fa mpanorina ny Dwayne & Janet. Ny mpampindram-bola misintona ny fisintonana voalohany (vola) ho an'ny mpanorina. Na eo aza izany, io tetikasa io dia voarara tanteraka amin'ny fampindramam-bola ary tsy misy vola avy amin'ny paosin'i Dwayne sy Janet. Tsy mila mahafantatra ny fomba hananganana trano i Dwayne & Janet. Tsy nanana traikefa tamin'ny fananganana izy ireo. Narahin'izy ireo tsotra fotsiny ny fampiofanana nataonay ary avy eo dia nanofana ilay mpanao trano hitanay. Ankoatr'izay, ireo mpandrindra ny fotoana feno traikefa naharitra am-polo taona dia afaka nandray soa tamin'ny fampiasana ny fandaharanay.
Ny tetikasa fananganana trano fanorenana amin'izao fotoana izao dia mampanan-karena ny mpandraharaha ara-bola ho an'ny Dwayne & Janet
Rehefa vita ny famolavolana ny trano, ny mpampindram-bola dia mandoa vola bebe kokoa amin'ny mpanamboatra ny fananganana azy.
Rehefa tapitra ny tafo ary vita ny fametrahana, ny karama farany dia alaina avy amin'ny tsenan'ny orinasa nahazo alalana efa nahazo alalana mba hamita ny asa vita sy ny asa hosodoko. Andraikitra vita ny fanorenana ny tranon'ny mpanjifanay Dwayne & Janet's House (nandritra ny fambolena)
Ankehitriny dia vita ny trano. Ny vidin'ny tsena dia tonga tamin'ny $ 385,000.
Ny vidin'ny vidin'ny tetikasa dia toy izao manaraka izao:
a. $ 125,000 hividy ny tany - feno vola amin'ny fampindramam-bola sy ny mpanjifany.
b. $ 25,000 vola fampindramam-bola fanampiny izay niditra tao amin'ny paosin'i Dwayne & Janet teo aloha rehefa nividy ilay tany.
c. $ 99,000 ao anaty fanorenana. Total: $ 224,000 izay voavatsy vola amin'ny fampindramam-bola. Vidin'ny tsena: $ 385,000Total tombombarotra nomanina alohan'ny famaranana ny fandaniana: $ 161,000 (izay $ 385,000 - $ 224,000).
Hatramin'ny nananganana trano roa i Dwayne & Janet dia $ 322,000 ($ 161,000 X 2) ny tombombarotra azo raisina mifototra amin'io vidin'ny tsena io. Ity ohatra ity dia ohatra iray tena mikajy ny fandaharan'asa momba ny famatsiam-bola ho an'ny roa amin'ireo mpanjifanay maro
Ny tetikasa manontolo dia afaka nividy, nanamboatra sy namidy tamin'ny fampiasana ny tambazotran'ny orinasa, voalaza fa, tsy misy antonony avy amin'ny paosin'i Dwayne & Janet. Ny tsenam-bola momba ny fananganana dia nandrakotra ny fandaniana rehetra
Ny tanjon'ity pejy ity dia ny hanomezanao ohatra iray tena misy eo amin'ny roa amin'ireo mpanjifantsika. Ny kilasy mivantana na DVD miaraka amin'ny fampiofanana anao dia hilaza aminao ny antsipirian'ny antsipiriany momba ny tokony hatao mba hampitomboana ny tombony avy amin'ny orinasa takelaka miaraka amin'ny fanampiana trosa atolotra ao amin'ny fonosana. Mandehana avy amin'ny Anderson's ho an'ny CEO Companies IncorporatedChristmas Sary avy amin'ny Anderson Travel Family ho any Disneyland izay miaraka amin'ny litera ambony
Mba hamandrihana ny orinasa Aged Corporation na Shelf Corporation miaraka amin'ny fampiofanana amin'ny fanampiana ara-bola, antsoina koa hoe corps de corps amin'ny programa karajia na corps de corps amin'ny fonosam-bola na corps de corps miaraka amin'ny karajia (tsipika izay ankatoavin'ny mpampindram-bola fa tsy karatra ara-bola) fampahalalana momba ny orinasa efa antitra miaraka amin'ny fehezan-dalàna voaisa nomena, antsoy azafady 1-888-444-4412, na iraisam-pirenena amin'ny + 1-661-253-3303 ary miresaha amin'ny iray amin'ireo manampahaizana manokana izay hanampy anareo amim-pifaliana. Mangataha alatsinainy hatramin'ny zoma eo anelanelan'ny ora 7: 00 AM sy 5: 00 PM Pacific Time.
NY FILAZANTSARAN'I JIOLONA IZAO NO MAMPIANATRA VEHIVAVY. NY RESAKA MALAGASY. EFA TONGA ANY AMIN'IZAY MPAMPIANATRA FAHAROA AO AN-TRANOMBOHANA AO ANATIN'IZAO OLANA AO AN-TSOKATRA MALAGASY HO ANTSIKA HO ANTSIKA HO ANTSIKA REHETRA NY OLONA SY AMPY AMINAREO OLON'I KRISTY AMIN'IZANY. ARAKA NY FAMPANDROSOANA, FANAZAVANA TANTERAKA MALAGASY TSY MISY MITOVY AMIN'IZAO TAMIN'I INVESTOR WHO'S BUILDING PROPERTY.
Ny orinasan-trosa - orinasa sy orinasa ho an'ny varotra
Aged Shelf Company Corporation sy LLC Disclaimers
Fivarotana fiantohana marolafy
FAQ shelf Corporation FAQ
Package orinasa orinasa
Tale jeneralin'ny orinasa any Kalifornia
Fampiofanana ny talem-paritra
Vondron'orinasa maromaro miaraka amin'ny Corporate Credit
Shelf Company sy Aged Corporation Glossary